Ikholeji yeZiko lezobuGcisa beSikethi sokuBakholwa kweeNkcazo: UkuFundisa nokuNinzi
Iindleko, Uncedo lwezeMali, iiScholarships, iiRhafu zokuQinisa kunye neNinzi
Iikholeji zeZiko lezobuGcisa beeNkcazo zeeNkcazo zeMveliso
Abafundi akumele bathumele amanqaku avela kwi-ACT okanye i-SAT-bayakwazi ukuba bathathe uvavanyo, kodwa abafunwa ukuba benze njalo. Ekubeni iKholeji yeZiko loBugcisa beSikolo sobugcisa, iphothifoliyo yomenzi wesicelo inxalenye ebalulekileyo yesicelo. Abafundi mabazithumele izicelo kunye nezikolo eziphambili zeempendulo, kodwa iphothifoliyo ithwala ubunzima kakhulu ekunqumeni ukuvuma.
Abafundi abanomdla kufuneka bahlole iwebhusayithi yezikole ukuze bafumane imiyalelo enzulu malunga nokokubandakanya kwi-portfoliyo - eyahluka ngokuxhomekeka kumfundi oyintloko - nokuba ungayithumela njani.
Ikholeji yeZiko lezobuGcisa kwiKholeji yokuBamkela: 69%
Ikholeji yeZiko lezobuGcisa liyi-admission-optional admissions
Ikholeji yeZiko lezobuGcisa Inkcazelo:
Ikholeji yeZiko lezobuGcisa idilesi ezimbini ePasadena, eCalifornia. I-Campside enkulu yeCollside Campus kwiintaba ngaphezulu kwesi sixeko sinesakhiwo esikhulu sebridge esiyilwe ngu-Craig Ellwood. I-South Campus entsha (evulekileyo ngo-2004) ihlala kwindawo eyayiyindawo yokukhusela i-WWII. Likhaya kwiiprogram ezininzi zezifundo, ivenkile yokuprinta, kunye neenkqubo zoluntu ezifana neZiko lezobugcisa ebusuku.
Idolophu yaseLos Angeles idolophu ezili-12 ukusuka kude, kunye neCaltech ne- Occidental College nganye malunga neekhilomitha ezili-5 ukusuka kude. Iiprogram zoyilo lwezobugcisa lweziko lobugcisa - bobabini abaphumeleleyo kunye negraduate - zihlala zibala phakathi kwezona zinto zilungileyo kwilizwe. Abafundi kwiziko lezobugcisa banamathuba amaninzi okuthatha inxaxheba kwiiklabhu zeenkampus, imibutho kunye neeprojekthi zoluntu.
Ikholeji ayinayo nayiphi na inkqubo yezemidlalo. Ikholeji ayinayo iindibano zokuhlala, kodwa isikolo sinendawo ye-website ye-campus kwaye iya kuncedisa abafundi abafuna ukulala ngexesha lekholeji.
Ubhaliso lwabonke: 2,138 (i-1,908 izifundo zakudala)
Isifundo kunye neMali: $ 40,596
Iincwadi: $ 4,000 ( kutheni uninzi? )
Igumbi kunye neBhodi: i-13,530 i-$ (ngaphandle kwekampus)
Ezinye iindleko: $ 6,492
Ixabiso lilonke: $ 64,618
Ikholeji yeZiko lezobuGcisa loCwangciso lwezeMali (2015 - 16):
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: 63%
Izibonelelo: $ 17,393
Imali: $ 5,945
I-Popular Majors: Ukupapashwa, UbuGcisa obuBugcisa, iMicrosoft Design, i-Industrial Design, Photography
Ukuba Uthanda Ikholeji yeCandelo lezobuGcisa beCandelo leMveliso, Uyakwazi kwakhona ezi zikolo:
Abafundi abakhangela isikolo sobugcisa kunye nabamkelekileyo abavunyelwayo, njengeCandelo leCandelo leeKhorenji yeZiko leMveli, kufuneka baqwalasele neKholeji yaseMark of Art and Design , i- College Institute of Art , i- Otis College of Art and Design , kunye ne- Savannah College of Art and Design .
Kubafaki-sicelo abanomdla kwisikolo esincinci se-liberal (abafundi abayi-1,000-3,000) eCalifornia, ezinye izigqibo ezifana ne-ACCD ziquka iFresno Pacific University , i- Occidental College , iKholeji yaseClaremont , kunye ne- Scripps College .
Ikholeji yaseWestminster, iSouth Lake City Admissions
USalman Rushdie "IimVesi zikaSathana": Iinkcazo zeMigqaliselo yeNgxabano
Ukubeka iingcebiso: Funda indlela yokwenza okungakumbi Ukubeka kwi-Green
Ngaba Zizinambuzane ZinamaBrains?